Inona no atao hoe Thundersnow sy ny fomba fiasa?
Science Storms & phenomena hafa
Ahoana ny fomba i Thundersnow miasa (ary aiza no hahitana azy)
Toy izao ny asa atao amin'ny thundersnow (ary aiza no ahitana izany)
Thundersnow dia oram-panala miaraka amin'ny kotroka sy ny tselatra. Zava-mahagaga io tranga io, eny fa na dia any amin'ny faritra matevina aza. Tsy voatery handrehitra kotroka sy tselatra ianao mandritra ny oram-panala. Tokony ho ratsy be ny toetr'andro. Ohatra avy amin'ny rivo-doza miaraka amin'ny kotrokorana dia ahitana ny rivo-doza bomb tamin'ny 2018, Blizzard tamin'ny 1978 (avaratra atsinanan'i Etazonia), ny oram-baratra Winter Nico (Massachusetts) ary ny Winter Storm Grayson (New York).
Aiza no hahitana Thundersnow
Mazava ho azy, raha tsy mangatsiaka loatra ny ranomandry, dia tsy misy ny fanontaniana. Any amin'ny taona iray, misy hetsika 6.4 isam-bolana manerana izao tontolo izao. Raha toa tsy mahazatra amin'ny toe-javatra rehetra ny thundersnow, ny toerana sasany dia manana fepetra kokoa kokoa noho ny hafa:
Faritra misy ny farihy
Ireo faritra mitatitra ny hainandro mahery vaika dia mampiseho ny ilany atsinanan'ny Great Lakes any Etazonia sy Canada, ny faritra lemaka any amin'ny faritra atsimoandrefan'i Etazonia, ny Great Salt Lake, ny Tendrombohitra Everest, ny Ranomasin'i Japon, Grande-Bretagne, ary faritra avo any Jordania sy Israely. Ny tanàna manokana fantatra amin'ny fanandramana ny thundersnow dia ahitana an'i Bozeman, Montana; Halifax, Nova Scotia; ary Jerosalema.
Ny zava-kendriny dia mitranga amin'ny faran'ny vanim-potoana, amin'ny volana Aprily na Mey amin'ny ilany atsimo-atsinanana. Ny volana volana amin'ny volana ambony dia Martsa. Ny faritra afovoany dia mety mahatsapa ranomandry, havandra, na mangatsiaka mangatsiaka fa tsy lanezy.
Ahoana ny fomba i Thundersnow?
Tsy dia mahazatra loatra ny tara-masoandro satria ny vokatra entin'ny orampanala dia miteraka fihenam-bidy amin'ny rivotra. Amin'ny ririnina, mangatsiaka ny tontolon'ny tontolon'ny tropôra sy ambany ary manana teboka ambany. Midika izany fa misy ny fahamendrehana kely na ny fifandonana mba hitarika amin'ny tselatra . Mitelina ny rivotra ny tselatra, fa ny hafanana haingana dia mamoaka ny onjam-peo antsointsika hoe kotroka.
Ny oram-baratra dia afaka mamorona amin'ny ririnina, saingy manana toetra isan-karazany izy ireo. Ny oram-baratra ara-drariny mahazatra dia misy rahona matevina avo be izay mitsambikina amina toetr'andro mafana avy any ambony hatramin'ny 40.000 eo ho eo. Matetika ny Thundersnow dia mamolavola rehefa manjavozavo ny tsy fisian'ny rivotra marevaka ny rivotra marevaka ary manandrana manandratra am-pahamendrehana. Antony telo no mitarika ho amin'ny tsy fandriampahalemana.
Ny oram-baratra ara-drariny eo amin'ny sisin'ny hafanana mafana na mangatsiaka dia afaka mihazakazaka mankany amin'ny loharano mangatsiaka, manova orana amin'ny oram-baratra ororana.
Ny fanerena ataon'ny Synoptic, toy ny hita any amin'ny rivo- doza iray, dia mety hitarika amin'ny kotrokorana. Ny rahona feno ranomandry dia manjary manaparitaka na mamorona izay antsoina hoe "turrets." Ny tilikambo manjopiaka manodidina ny rahona, mahatonga ny lay ambony tsy hay. Ny tondra-drano dia miteraka ny molekiolan'ny rano na ny ranomandry amin'ny gilasy mba hahazoana na handefa elektronika. Rehefa lehibe ny fahasamihafana herinaratra eo amin'ny vatan'ny olona roa, dia mitroka ny tselatra.
Ny lohan'ny rivotra mangatsiaka mandalo ny rano mafana dia afaka mamokatra kotrokorana. Izany no karazana kotrokorana izay hita matetika any akaikin'ny Great Lakes na akaikin'ny ranomasina.
Fahasamihafana avy amin'ny oram-batravatra
Ny fahasamihafana goavana eo amin'ny kotrokorana sy ny kotrokorana dia ny oram-baratra manome orana, fa ny thundersnow dia mifandray amin'ny lanezy.
Na izany aza, tsy mitovy ny kotroka sy ny tselatra ny kotrokorana. Mientanentana ny ranomandry, noho izany dia misy feo mitsonitina ny kotrokorana ary tsy mandeha lavitra toy ny any amin'ny lanitra mazava. Ny kotroka ara-drariny dia mety heno kilaometatra avy ao amin'ny loharano, raha toa ny kotrokorana ny kotrokorana dia voafetra ho voafetra amin'ny 2 km 3 km (3,4 na 4,8 kilometatra) amin'ny fipoahana baomba.
Raha toa ka mionona ny kotrokorana, ny tselatra dia marefo amin'ny alàlan'ny ranomandry. Ny tselatra ny thundersnow dia hita fa fotsy na volamena, fa tsy manga manga na violet ny tselatra.
Ny zava-mitranga miteraka amin'ny kotrokorana dia mitarika amin'ny hafanana mangatsiaka be loatra sy ny fahitana tsy dia tsara loatra amin'ny fipoahan'ny lanezy. Azo atao ny rivotra mahery. Ny Thundersnow no mahazatra indrindra amin'ny alim-basy na oram-batravatra ririnina .
Ny tselatra ny thundersnow dia azo inoana kokoa fa manana fiantohana herinaratra mahasoa. Ny tselatra fanararaotam-po tsara kokoa dia manimba kokoa noho ny zana-tsipìka mahazatra. Ny tselatra tsara dia mety hahatratra folo heny mahery noho ny tselatra ratsy, hatramin'ny 300.000 amperes ary iray lavitrisa volts. Indraindray misy fitokonana mahatsiravina mihoatra ny 25 kilaometatra miala amin'ny toerana fisotroana. Ny tselatra matevina dia mety miteraka afo na manimba ny famaritana herinaratra .
Thundersnow no anarana nomena ny oram-panala izay mamoaka kotroka sy tselatra.
Miankina amin'ny toe-javatra, mety ho ny oram-baratra na ny havandra no halefa fa tsy lanezy.
Thundersnow dia mahalana. Indraindray dia mitranga any amin'ny lemaka, tendrombohitra, na amoron-tsiraka, na amin'ny lanezy any amin'ny farihy.
Ny kotroka amin'ny kotrokorana dia mihiaka feo. Miposaka ny fotsy noho ny mahazatra ny tselatra ary mety hitondra fiantohana tsara.
> Patrick S. Market, Chris E. Halcomb, ary Rebecca L. Ebert (2002). Ny klimatologin'ny zava-nitranga Thundersnow manoloana ny United States mpifanandrina. Fikambanana Amerikanina Meteorolojika . Retrieved 20 Febroary 2018.
> Rauber, RM; et al. (2014). "Ny toetran'ny toetr'andro sy ny fametrahana ny karazam-borona ao amin'ny faritra avaratry ny Rivo-doza Continental". J. Atmos. Sci . 71 (5): 1559-1582.
Ireo karazana hetsika tondra-drano ary ny antony mahatonga azy ireo
Inona no ratsy indrindra: Tendrombohitra, Tornado, na rivo-doza?
Inona no atao hoe orana?
Aromatherapy atomoka: ny fofon'ny orana (sy ny toetr'andro hafa)
Inona ny toetr'andro?
Inona no atao hoe rivodoza tropikaly?
Masoandro sy Rain: Recipe for Rainbows
Inona (ary rahoviana) no vanim-potoan'ny rivo-doza?
10 Fahavetavetana atsy am-parany izay handroboka anao
Ahoana ny fomba ahafahana miaina blizzard
Vehivavy mafàna haingana indrindra: Svetlana Masterkova
Scorpio, ilay Scorpion: Zodiac manasonia
5 Fahavitan-tsoa ny evolisiona
Jeografia ao amin'ny Saikinosy Yucatan
'The Little Match Girl' (na 'Little Matchstick Girl') - Tantara fohy
Inona no Comic Comics?
Minitra ao amin'ny asa fanoratana
Glossary ny fampiasana: Waive and Wave
Hetsika hafakely ho an'ny mpandeha
Ahoana ny fampiasana tapakilasy iray momba ny karabinerina
Fampidirana ny tambajotra Network
Ahoana ny fomba hananganana ny takelaka fanoratana skateboard
Inona ny fahatanterahan'ny fahaleovan-tena boddista?
Inona no atao hoe fampihorohoroana ary nahoana no zava-dehibe izany?
5 Antony Tokony Tokony Hitaky An'i Fredrik Bakman "Lehilahy iray Voantso"
Ny rafitra Xinjiang Qanat an'ny Turpan Oasis
Inona no mitranga? (Ary Ahoana no Fihetseham-po Amin'ny Tombim-borona?)
Tanànan'i Swahili: Fiarahamonina matihanina any Afrika Atsinanana
Ady An-trano Amerikanina: Battle of Peebles Farm
Diary momba ny tantara manerantany - Sarintany roa tapitrisa taonan'ny maha-olona
Rs. Sexiest Sexiest
Top 7 baolina baolina ho an'ny mpangataka fahaverezana